Sandals: Raaxada kaliya ee 5-xiddig ee adduunka waxaa ka mid ah meelaha lagu nasto
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Sandals: Kaliya raaxada 5-xiddig ee adduunka waxaa ka mid ah meelaha lagu nasto
Wararka Antigua & Barbuda • Bahamas News Breaking • Barbados News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Curacao Breaking News • Wararka Grenada • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • Wararka Saint Lucia • Dalxiiska • Qiimaha Safarka | Talooyinka Safarka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Sandals: Kaliya raaxada 5-xiddig ee adduunka waxaa ka mid ah meelaha lagu nasto
Sandals Resorts and Beaches waxay muujinayaan xirmada raaxada 5-xiddig ee ugu dhameystiran adduunka oo ay martidu ku raaxeysan karaan xeebaha ciidda cad-cad, Cunnada Global Gourmet,, hoy aad u wanaagsan, khamri qiimo jaban oo aan xad lahayn, cayaaraha biyaha xiisaha leh, iyo inbadan.
Marka Sandals Resorts ay dhahaan waa loo dhan yahay, waxay ka dhigan tahay in loo dhan yahay si kasta oo la malayn karo iyo hab 5-xiddigle ah.
Ma jiraan lacago qarsoon ama layaab leh, iyo waayo -aragnimada martida ayaa ah mid aad u wanaagsan oo gaadhaysa wixii laga filayay.
Laga bilaabo daqiiqadda martidu ka soo degto diyaarad, wax walba waa la daryeelayaa laga soo bilaabo gegida dayuuradaha oo loo wareejiyo talooyin - laga bilaabo bilowga fasaxa illaa daqiiqadda martidu ay raacaan diyaarad si ay ugu laabtaan guriga.
Runtu waxay tahay in waxa kale ee loogu yeero dhammaan dadka la isku daray ay ku daraan eedeymaha-sida canshuuraha dowladda, wareejinta gegida dayuuradaha, khamriga qaaliga ah, waxqabadyada la casriyeeyay, cuntada khaaska ah, iyo talooyinka. Isagoo ka hadlaya talooyin, halkan waa talo. Tani waligeed kama dhici doonto Sandals-ka, maxaa yeelay gabi ahaanba wax walba waa lagu daray, oo aan lagu darin kharashyo qarsoon iyo wax la yaab leh, marka laga reebo dhammaan waxyaabaha la yaabka leh ee ay sameeyaan waxaa ka mid ah-sida raaxo 5-xiddig oo run ah.
Kabaha kabaha ayaa ah midka kaliya ee adduunka 5-xiddigta raaxada waxaa ku jira dalxiis halkaas oo had iyo jeer loo dhan yahay markasta. Kabaha sandalku wuxuu siiyaa martida soo dhaweyn tayo leh oo ka badan meelaha kale ee meeraha ku yaal. Tusaale ahaan, Sandals -ka waxaa ku jira xulashada ugu ballaaran ee isboortiga biyaha - xitaa kuwa baabuurta leh - dhammaantood waa lagu daray, oo ay ku jirto barashada. Kaliya Sandals -ka waxaa ka mid ah quusidda maalinlaha ah oo lagu daray marsada qubeyska ee xirfadleyda ah, hagayaal xirfadeed, doonyaha quusitaanka Newton, iyo goobaha quusitaanka ugu fiican ee Kariibiyaanka.
Dhulka, Sandals-ka waxaa ka mid ah isboortiga ugu ballaaran sida golf-ka oo leh khidmado cagaaran oo bilaash ah-wareeg-wareeg ah oo aan socod lahayn. Ma jiro wax kale oo loo dhan yahay oo leh Greg Norman oo loogu talagalay koorsooyinka golf-ka horyaalnimada.
Sidee suite u yahay
Ilaa iyo inta hoygu socdo, ma jiro wax heer ah oo ku saabsan suullada Sandals, oo bixiya suuli aad u badan sida Skypool Suites, Swim-Up Suites, Millionaire Suites, Rondoval Suites wareega, Villa-ka Biyaha, iyo Bungalowyada Biyaha Dheeraad ah. Kaliya Sandals -ka waxaa ku jira kuwa khamriga ah ee ku jira buulkooda jacaylka Butler Suites.
Dhammaan khamriyada qaaliga ah mar walba waa lagu daraa - looma baahna in la sugo hal saac oo farxad leh maalintii. Meel kasta oo lagu nasto waxaa ku yaal ilaa 11 baararka oo aan lahayn tab iyo xuduud toona. Sandals -ka, martidu waxay ku raaxaysan karaan shubitaan aan xad lahayn oo ah Robert Mondavi Twin Oaks khamri.
Cuntada khaaska ah ee Sandalsku waa, si fiican, waa takhasus. Sandals-ka waxaa ka mid ah mar kasta oo aan xad lahayn oo 5-xiddig ah oo lagu cuno cunto-kariye caalami ah ilaa 16 maqaayadood oo khaas ah halkii dalxiis. Makhaayad kasta waxay leedahay kuugga heer-caalami ah iyadoo la adeegsanayo maaddooyinka beer-ilaa miiska ugu cusub.
Sandals kasta xirmo fasax oo loo dhan yahay waxaa ka mid ah:
CUN + CABO
Cunto gourmet 5-xiddig ah ilaa 16 maqaayadaha dalxiis kasta
Quraac, qado, casho iyo wakhti kasta cunto fudud
Unlimited khamriga qaaliga ah
Ilaa 11 baararka halkii dalxiis
Baararka ku kaydsan qol kasta
Unlimited Robert Mondavi Twin Oaks® canab
PADI-Shahaado dharbaaxidda (iyo dhammaan qalabka)
Safarrada Snorkeling (iyo dhammaan qalabka)
Bisadaha Hobie, looxyada taagga, doonyaha
Barashada xirfadeed ee isboortiga biyaha
Private jasiiradaha badda ee Sandals Royal Caribbean iyo Sandals Royal Bahamian
Khidmadaha cagaaran ee annaga golf koorsooyinka ku yaal meelaha la doorto
Volleyball -ka xeebta, kubbadda koleyga, miisaska barkadda
Tenniska habeen iyo maalin
Xarunta fayadhowrka oo wata qalab casri ah
Maalin iyo habeen madadaalo oo ay ku jiraan bandhigyo toos ah
Dhaqdhaqaaq cayaaraha biyaha meelaha la doorto
Exclusive Mudnaanta Sarrifka u dhexeeya meelaha lagu nasto
Walwal ma leh
Dhammaan talooyinka, canshuuraha iyo hadiyadaha
Wareejinta madaarka Roundtrip
Sarkaalka Imaanshaha Garoomada Gaarka ah ee Jamaica iyo Saint Lucia
Dhammaan hoteelada Sandalsku waa dad waaweyn oo keliya, oo loogu talagalay lamaanayaasha isjecel
WiFi lacag la'aan ah (qolka dhexdiisa iyo dhammaan meelaha la wadaago)
Aroos bilaash ah (joogitaanka 3 habeen ama ka badan)
Personal Adeegga Butler iyo wareejinta gaarka loo leeyahay inta badan qolalka heerka sare ah